Môtô Ary ATV Vin Decoder
Mba decode ny vin, isan'ny môtô dia mila toerana aloha ny vin, isa. Ny vin, isa tsy manam-paharoa izany moto iray manokana ary tsy roa dia mitovy.
Jereo Vin Number eto
Amin'ny alalan'ny decoding ny vin, isa amin'ny misy bisikileta na ATV, dia afaka mianatra zavatra betsaka momba ny bisikileta, such as who the manufacturer is and the country it was manufactured. Ireo matetika telo voalohany taratasy sy tarehimarika eo amin'ny vin, lovia.
Ny fahefatra amin'ny alalan'ny tarehimarika ny fahavalo manondro ny antsipiriany momba ny bisikileta toy ny tena fomba sy ny maotera karazana. Decoders manana izany ny ankamaroan'ny vaovao azo, fa indraindray dia tsy maintsy mifandray amin'ny mpanamboatra ny mahazo ny vaovao rehetra.
Ny fahasivy tarehimarika apetraka eo amin'ny bisikileta ny fandraisana ho mpikambana tanjona sy antoka fa ny vin, dia tena.
Ny fahafolo, ho an'ny tarehimarika dia ny taona fa ny fiara dia namokatra. A amin'ny alalan'ny Y dia toy ny fiara, ary maneho ny taona avy 1980 ny 2000. From 2001 ny 2009 ny tarehimarika dia ho 1 ny alalan ' 9 ka mifamaly amin'i tamin'io taona. From 2010 izy ireo manomboka Alphabetical indray toy ny avy 1980 ny 2000.
Mba hahitana ny iray amin'ireo tsara indrindra Yamaha, Kawasaki, Suzuki Motorcycle sy Harley Davidson Vin Decoders mijanona miala amin 'ny toerana.
Môtô Vin maso sy ATV Vin Check